Amathuluzi Ekhishi & Amagajethi
Ingane Encane Ibalulekile
Isikhunta se-Silicone Cake
I-Silicone Ice Mold
Ukudla Nesitoreji Esigoqekayo
I-Packing Tube & Ornament Ball
INKONZO YOKWENZA NGENDLELA YEMIKHIQIZO
Sihlinzeka ngezinsiza zokwenza ngokwezifiso kumakhasimende ethu kuphothifoliyo yomkhiqizo wethu ngokuya ngedizayini ye-3D, ubukhulu, imibala, ukuphrinta nokuthungwa njengokukhetha kwamakhasimende, ukukhiqiza imibono emisha, kanye nokusebenzela izidingo zabo zemakethe ye-Ecommerce.
Sizibophezela kumakhasimende ethu ukuthi siwalethele imikhiqizo yelebula eyimfihlo ngokwezimfuneko zawo ngokuxhumana eduze nawo mayelana nomklamo womkhiqizo awufunayo webhizinisi lawo, bese siwenza ube ngokoqobo ngokusebenzisa ubuchwepheshe bethu ku-Product Conceptualization & Engineering, 3D Designing, Ukuklama Isikhunta, I-Prototyping & Testing ngokuthumela amasampula mahhala kumakhasimende ethu futhi ekugcineni siqhubekele ekukhiqizweni ngobuningi ngemva kwesivumelwano sobabili.
1)Ukwenziwa koMkhiqizo: Ukuqoqwa kwemibono ngokuthatha imibono evela kumakhasimende nokuphothula nethimba lethu Lonjiniyela ukudala ibhalansi ekusetshenzisweni kwezinto ezibonakalayo, umthamo womkhiqizo, isisindo esiphelele, futhi ucabangele amanye amaphuzu abalulekile angafeza imfuneko yomthengi wokugcina.
2)Ukudizayina kwe-3D:Ukudizayina Umkhiqizo kubandakanya ukuthuthukiswa Kwedizayini Yobunjiniyela kusetshenziswa isofthiwe yakamuva ye-CAD/CAM futhi ikhasimende linikeza impendulo mayelana nokugunyazwa noma izibuyekezo.Sithuthela ekwakhiweni kokubumba ngemuva kokuthola isiqinisekiso esivela kukhasimende.
3)Ukuklama isikhunta:Yakha isikhunta ngokomklamo ogunyaziwe womkhiqizo we-3D othuthukiswe kusofthiwe yobunjiniyela.
4)I-Prototyping nokuhlola:Ukukhiqiza ingxenye eqinile ye-3D ngosizo lomshini we-CNC nokuhlola insiza yokuklama kwawo, ukwenza ukuhlola ikhwalithi yezici ezihlanganisiwe, ubukhulu, isisindo, umbala, nezinye izici ezibalulekile zomkhiqizo.
5)Ukugunyazwa Kwekhasimende:Ikhasimende ligunyaza isampula lomkhiqizo lokukhiqiza ngobuningi.
6)Ukukhiqizwa Okuningi:Umnyango Wokukhiqiza uyahola ukukhiqiza i-MOQ efiselekayo phakathi nesikhathi sokuhola sokukhiqiza okuvunyelwene ngaso nekhasimende.
Sihlinzeka ngohlu olubanzi lwezisombululo zezokuthutha ngokuthumela ngokuphephile inkatho kuwo wonke umhlaba sisebenzisa izindlela ezahlukene zokuhamba.Ngokusekelwe kulwazi lwethu lweminyaka eyi-10, sihlinzeka ngosekelo lwezinga eliphezulu ngezidingo zakho zemikhumbi nezimpahla.
Ubudlelwano bethu obuthembekile besikhathi eside nabathumeli bempahla, ulwazi ezindabeni ezihlobene ngokwezifiso, nokuxhumana okuqondile nabasebenzeli bechweba kuphumela ekuthumeleni uhlu lwamagama ngokushelela endaweni oyifunayo ngesikhathi esifanele, ngaphandle kokuhlupheka, nangokuphepha nangokuvikelekile.
AbakwaFreight Forwarders banesibopho soku:
Ngenisa/Thumela Ngaphandle Kwemvume Yekhasimende kanye nokulethwa kwemibhalo edingekayo
Ukuxhumanisa nemigqa yemikhumbi ukuze kuhanjiswe ngempumelelo emhlabeni wonke kuze kube sechwebeni.
Ukuxhumana ne-UPS/FedEx ukuze kuthunyelwe ngempumelelo endaweni kuze kube yilapho uya khona.
ISEVISI OKULUNGILE UKUZE KUTHUNYELWE
Sinikezela ngezinsizakalo zokuthumela ezibanzi ezihlanganisa indawo yasekhaya kuye emhlabeni wonke kusukela kumaphakeji kuye kumaphalethi anezixazululo eziguquguqukayo, ezithembekile, nezimongayo ezigxile kumakhasimende kuphela.
1) Ukuthumela ama-oda wamakhasimende ngendlela yokulethwa kwamaphasela amancane (SPD)
2) Palletizing ukuthunyelwa okusindayo LCL kanye FCL.
3) Ukuxhumana nezinsizakalo zokulethwa kwasendaweni ezifana ne-UPS ne-FEDEX ukuze kuthunyelwe okugcwele ngesikhathi endaweni yekhasimende.
Impendulo yekhasimende ngomkhiqizo ingamandla ethu.Ngakho-ke, siqinisekisa ukuthi izinkinga amakhasimende abhekana nazo ngeke zihlangabezane nazo emkhiqizweni odluliselwe ekuhlolweni kwekhwalithi nokuhlolwa okuphelele.
Amasevisi ethu okuhlola aqinisekisa ikhwalithi yomkhiqizo oyi-premium, ukunemba, ukuklama, nosizo ekwehliseni ubungozi ngokuhlangabezana nazo zonke izindinganiso zamazwe ngamazwe nezibopho.Abasebenzi bethu abanolwazi lokulawula ikhwalithi kanye nemishini yesimanjemanje isiza ekukhiqizeni imikhiqizo yekhwalithi.
Sinikezela ngezinsizakalo zokuhlola kumakhasimende ahloliwe futhi athembekile.Sinikeza umbiko onemininingwane enempendulo yomhloli ukuze sinelise ikhasimende.
I-AQL (Defect Limit Major: 2.5%, Minor 4%)
I-Carton Drop Testing
I-FBA Carton Labels iyahlola
Ukuqinisekiswa Kwekhodi Yebha
Sihlinzeka ngamasevisi ahlobene nokuthatha izithombe komkhiqizo afaka isithombe somkhiqizo omkhulu, ukusetshenziswa komkhiqizo, izici zomkhiqizo, ubukhulu bomkhiqizo, nemifanekiso yendlela yokuphila.Sinikeza iphakheji ephelele yezithombe zohlu lwe-Amazon kanye nokuqukethwe kwe-A+ okuhlanganisa i-infographic, izithombe ze-3D, nendlela yokuphila.Siletha ubuciko kokuqukethwe kwakho kwe-A+ kanye nezithombe zohlu ngokusebenzisa ubuchwepheshe bethu bokuthwebula izithombe ne-photoshop ukuze siqhubele ukuthengisa ku-akhawunti yakho.
Sihlala sibheka amakhasimende ethu njengokubalulekile kakhulu
Asikubekezeleli nhlobo ukuyekethisa kwikhwalithi
Senza isiqiniseko sokuthi ulwazi lokuthenga kwamakhasimende lufanelekile
Ibhizinisi lethu ngaphansi kophahla olulodwa lilenza libe wuhlelo oluphakathi nendawo nomnyango odidiyelwe
Ifakwe imishini esezingeni eliphezulu ekhiqiza udoti omncane
Sinikeza isevisi yangemuva kokuthengisa eqinisekisa ukwaneliseka okungu-100% kwamakhasimende
Izinsiza ezinolwazi neziqeqeshelwe ukwenza izinqumo ezihlakaniphile, ukusebenza ngokukhiqiza okuphezulu, ukuletha izixazululo ezisebenzayo futhi kuletha imiphumela emihle ehambisana nombono we-YONGLI.
I-Yongli yasungulwa ngo-2009, umkhiqizi ochwepheshe okhethekile ekucwaningeni, ekuklameni, ekukhiqizeni nasekukhangiseni imikhiqizo ye-silicone ye-kitchenware ye-houseware nezipho zokuphromotha.